बैंकले मन पराउने कर्मचारी कस्ता ? – Banking Khabar
बैंकले मन पराउने कर्मचारी कस्ता ?
बैंकिङ खबर । सामान्य अर्थमा रुपैयाँ, पैसा तथा साख सम्बन्धी कारोबार गर्ने कानुनद्धारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थालाई बैंक भनिन्छ । बैंकले सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्विकार गर्दछ र सर्वसाधारणको माग अनुरुप भुक्तानी गर्नुको साथै उनीहरुको माग अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दछ । सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित राखिदिनुका साथै बैंकले किसान, व्यापारी, उद्यमी एवं सर्वसाधारणलाई कर्जा उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले बैंक जनताको एउटा विश्वासिलो र भरपर्दो संस्थाको रुपमा परिचित छ । बैंक यस्तो संस्था हो जसलाई सीसाको घर पनि भनिन्छ । जहाँ जोखिमको मात्रा बढी हुने गर्दछ । त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु इमान्दार र नैतिकवान हुनुपर्छ । इमान्दार र नैतिकवान् मात्र होइन योग्य तथा दक्ष जनशक्तिलाई छनोट गर्नु पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणहरुको लगानी तथा निक्षेप बढी हुने भएकाले वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । साथै, वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमा विश्वसनियता हुनु जरुरी छ ।
बैंकका कर्मचारीमा निम्नलिखित गुण हुन जरुरी छ ः
बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई अत्याधिक दबाव तथा असंख्य दायित्वहरु बीच आफनो जिम्मेवारीमा आएको दैनिक कामहरु गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्य दायित्वहरु पुरा गर्दै आफनो दैनिक कामहरु अति नै चालाखी तथा मिहिन कुराहरुमा समेत ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले बैंकको कर्मचारीहरुको व्यक्तित्व अन्य साधारण कर्मचारीहरुको भन्दा फरक हुनु पर्दछ ।
बैंकका कर्मचारी जो समस्याहरुसँग नडराई त्यसको डटेर सामना गर्न तथा आवश्यक परेको बेला कार्यालय समयभन्दा अन्य समयमा समेत काम गरेर समस्याको उचित सामाधान खोज्न सक्ने हुनुर्पछ । त्यस्तो व्यक्तिलाई बैकिङ्ग क्षेत्रमा काम गर्न बढी प्राथमिकता दिईनु पर्छ ।
प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वले हरेक पल नयाँ अविष्कारहरु गरि रहँदा त्यसको प्रयोग सबैभन्दा पहिले बैकिङ क्षेत्रमा नै भित्रिने गरेका छन् । साथै भित्रिएका प्रविधिहरु पनि लामो समयसम्म रहिनरहने भएकोले बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई धेरै कुराहरु निरन्तर रुपमा सिकिरहनु पर्ने हुन्छ । यसको अलावा आफुलाई समयानुकुल परिष्कृत गर्नको लागि पनि केहि न केहि दैनिक रुपमा सिकिरहनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ, बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरु सदैव नयाँनयाँ कुराहरु सिक्नको लागि तत्पर रहनुपर्दछ ।
बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुमा अर्को नभई नहुने गुणहरु मध्ये एक हो, कुुशल संचारकर्ता । बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरु ग्राहकहरुसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्ने भएकोले यो गुण हुन आवश्यक मानिन्छ । बैंकको कर्मचारीहरुले आर्थिक कारोबारहरुको सम्बन्धमा ग्राहकहरुलाई नहिचकिचाई तथा झन्झट नमानिकन संचार गरि रहनुपर्ने भएकोले यो गुण कुनै पनि बैंकको कर्मचारीमा हुन आवश्यक हुन्छ ।
बैंकको कर्मचारीहरु आफनो कामहरु आफु स्वयंले नै गर्न सक्नु पर्दछ । आफ्नो जिम्मेवारीको कामहरु गर्नको लागि अरु कर्मचारीको सहयोग लिने अवस्था नआएको नै राम्रो मानिन्छ । आफुले गर्ने कामको सम्बन्धमा आफुलाई पुर्ण जानकारी छैन भने आफुले गरेको काम सही वा गलत के छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सकिँदैन । तसर्थ, बैंकको कर्मचारीले आफनो काम गर्नको लागी अरुमा भर नपरिकन स्वतन्त्र भई काम गर्न सक्ने हुनुपर्दछ ।
बैंकमा गर्नुपर्ने कतिपय कामहरु एक्लै गर्न नसक्ने प्रकृतिको हुन्छ । यस्तो प्रकृतिको काम गर्नको लागि केहि कर्मचारीहरुको टिम बनाई काम गर्नुपर्ने भएकोले टिममा बसेर काम गर्न सक्ने गुण भएको कर्मचारीलाई बैंकले अत्याधिक रुपमा रुचाउने गर्दछ ।
सर्तक तथा जागरुक
बैंक भनेको आर्थिक कारोबार हुने कार्यालय भएकोले बैंकको कर्मचारीहरु सदैव सर्तक भई काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको समाजमा सवै एकै किसिमको मानिसहरु मात्र नभई उछृङ्खल तथा अराजक मानिसहरु पनि बस्ने गर्दछन् । समाजको अराजक तत्वहरु ग्राहकको रुप धारण गरि बैंकमा आएर विभिन्न प्रकारको गैर कानुनी कामहरु गर्न सक्ने सम्भावना पनि उतिकै भएकोले बैंकको कर्मचारीहरु सर्तक तथा जागरुक हुनु पर्दछ ।
बैंकको कर्मचारीहरु इमान्दार हुनु अति नै आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीहरु बैंकको आर्थिक कारोबारहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनुपर्ने भएकोले यो गुण अति नै मह्त्वपुर्ण गुण मानिन्छ । कर्मचारीहरुले कुनै लोभ लालचमा नपरि काम गर्नुपर्दछ । एक पटक गुमेको विश्वास कहिले पनि फिर्ता नहुने भएकोले कर्मचारीको इमान्दारीताको दैनिक रुपमा नै परिक्षण हुने गर्दछ । त्यसकारण बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरु इमान्दारी हुनुपर्छ ।